मोदीलाई काठमाडौंमा पनि साँचो बुझाइने ! – RadioMBC
Home > राजनीति > मोदीलाई काठमाडौंमा पनि साँचो बुझाइने !
२९ बैशाख २०७५, शनिबार ०८:१८
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शनिबार महानगरको कलात्मक साँचोको प्रतिक दिने भएको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीलाई मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नागरिक अभिनन्दनका क्रममा ‘काठमाडौंको कलात्मक साँचो’ हस्तान्तरण गर्ने भएका हुन्।
” यसअघि नेपाल भ्रमणका आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई पनि नागरिक अभिनन्दन गरी काठमाडौंको साँचो बुझाएको थियो। “
यर शाक्यले सो अवसरमा मोदीलाई नेपालको मौलिक कलाकृति झल्कने उपहार दिनेछन्। स्वागतका लागि महानगरपालिकाले तयार पारेको स्वागत गीत सोही कार्यक्रममा पहिलोपटक बजाइने भएको छ। अन्त्यमा मोदीले महानगरपालिकाको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नेछन्। सामूहिक तस्वीरपछि कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ।